Samsun Sivas မီးရထားတရားရုံး၏အကောင့်အစီရင်ခံစာ! ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။
အရေးကြီးသောဝေဖန်မှုများကိုရှာဖွေစဉ် 'ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာန 2018 နှစ်စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ' သည်ဆမ်ဆစ်ဗစ်မီးရထား၊ မေးခွန်းနှင့်ပြmanyနာများစွာဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောမြွေဆောက်လုပ်ရေးဇာတ်လမ်းကိုပြန်သွားခဲ့သည်။ ကြက်ဆင် [ပို ... ]
တူရကီ Re အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်
တူရကီ Re အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်; ပို့ဆောင်ရေးနှင့် (IMO) ၏အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan, တူရကီ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့, 2020-2021 ၏ကာလများအတွက်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Turhan ပြောတာကတော့ [ပို ... ]
တူရကီရဲ့မြို့တော်တူရကီ YHT တည်ရှိသောဥရောပအကြီးမားဆုံးစတူဒီယို Sincan အမြင့်မြန်နှုန်းရထားမူလစာမျက်နှာကို Maintenance Depot, တစ်ခုမှာမြန်နှုန်းမြင့်ရထားအတှကျအသုံးပွုတဲ့ရထားလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသိုလှောင်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ Etimesgut Etiler ရပ်ကွက်အတွင်းတွင်တည်ရှိသည် [ပို ... ]
Karaman Konya မြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းကိုဘယ်တော့ဖွင့်မှာလဲ။
ဘယ်အချိန်မှာ Karaman Konya မြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းဖွင့်မှာလဲ။ ရီပတ်ဘလီကန်ပြည်သူ့ပါတီ Karaman လက်ထောက် Av ။ mailsmail Atakan Ünver၊ ပါလီမန်စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ကော်မရှင်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့် 2020 နှစ်ဗဟိုအစိုးရဘတ်ဂျက်ဥပဒေ။ [ပို ... ]
Antalya ညဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယားကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အများပြည်သူအားတားဆီးနိုင်ရန် Antalya Metropolitan Municipality၊ ဆောင်းရာသီတွင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ပြtroubleနာဖြစ်စေသည်။ 23.00 တွင်ညအိပ်ပျံသန်းခြင်းကိုစတင်သောလျှောက်လွှာနှင့်စတင်သောယာဉ်များ [ပို ... ]
TransportationPark ၀ န်ထမ်းများသွေးလှူဒါန်းသည်
TransportationPark ၀ န်ထမ်းများလှူဒါန်းသောသွေး၊ Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာ၊ TransportationPark ၏တွဲဖက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် A.Ş. ၀ န်ထမ်းများကလခြမ်းနီကိုသွေးလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ကမ်းခြေလမ်းဘတ်စ်ကားဂိုဒေါင်တွင်ပထမဆုံးလှူဒါန်းမှုသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပန်းခြံ၏ပထမ ဦး ဆုံးသွေးဖြစ်သည်။ A.Ş. အထွေထွေမန်နေဂျာ Salih Kumbar [ပို ... ]
ESHOT သည်ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းအတွက်ဆောင်ရွက်သည်။ Nzmir Metropolitan Municipality Tunç Soyer မှကြေငြာခဲ့သည် - greenzmir သည် 2030 ဖြင့်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို 40 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်လျှော့ချလိမ့်မည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတုအကျပ်အတည်းသည်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုမိုနက်ရှိုင်း [ပို ... ]